पे स्ट्यान्ड: कुनै लेनदेन शुल्क बिना क्रेडिट कार्ड स्वीकार्नुहोस् Martech Zone
पे स्ट्यान्ड: कुनै लेनदेन शुल्क बिना क्रेडिट कार्ड स्वीकार्नुहोस्
मङ्गलबार, अप्रिल 15, 2014 मङ्गलबार, अक्टोबर 7, 2014 Douglas Karr
जब मैले क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करणको साथ हाम्रो चलानी प्रणाली एकीकृत गर्‍यो म यो कति जटिल थियो र त्यसपछि उनीहरूले लेनदेनमा कति पैसा लिन्छन् भन्नेमा म धेरै स्तब्ध भए। तब म स्तब्ध भएँ कि मैले दुई प्रणालीहरू प्राप्त गर्नुपर्‍यो ... क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर र एक व्यापारी खाता। मलाई मात्र फाइदा भयो कि म यो मेरो बैंकसँग गर्न सक्षम थिएँ - तर पक्कै तिनीहरू आफ्नो ब्याज दरहरू बढाउन केही दिन कोषहरूमा लगिन्छन्। उह।
PayStand भर्खरै सुरू गरिएको र उद्योग परिवर्तन गर्न सक्दछ। Paystand ले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइट र सामाजिक नेटवर्कमा पैसा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ बिना अतिरिक्त सफ्टवेयर, कोडिंग वा व्यापारी खाता आवाश्यक हुन्छ। प्रमुख क्रेडिट कार्ड, eCheck, र eCash सबै साथ स्वीकार्नुहोस् कुनै लेनदेन शुल्क छैन तपाइँको संगठन को लागी।
PayStand निम्न सुविधाहरू समावेश गर्दछ:
बिल्ट-इन मोबाइल वेबसाइटहरू - प्रत्येक डिजाइनले स्वचालित रूपमा एउटा अनौंठो मोबाइल अनुभव समावेश गर्दछ जुन तपाइँको पेस्स्ट्यान्डको समग्र शैलीसँग मेल खान्छ, त्यसैले तपाइँको सामग्री प्रत्येक उपकरणमा हरेक पल्ट उत्कृष्ट देखिनेछ।
स्मार्ट लिंकहरू - तपाईले बनाउनु भएको प्रत्येक वस्तुले लिंक प्रदान गर्दछ जुन सहजै थाहा हुन्छ कि यो कहाँ खोल्दैछ। तपाईंको स्मार्ट लिंक फेसबुक, Pinterest, ट्विटर, ईमेल, वा वेब मार्फत साझेदारी गर्नुहोस्।
अर्डर व्यवस्थापन - ट्र्याक अर्डरहरू, ग्राहकहरूलाई जवाफ दिनुहोस्, सेतो लेबल रसिदहरू, ट्र्याक सूची पठाउनुहोस्, शिपिंग जानकारी र अधिक कुराकानी गर्नुहोस्।
बहु टेम्प्लेटहरू - हालको ब्राउजर र मोबाइल उपकरणहरूको साथ उपयुक्त र नयाँ HTML, CSS र जाभास्क्रिप्ट प्रविधिहरू प्रयोग गरेर।
बहु स्टोर फ्रन्टहरू - तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको PayStand इम्बेड गर्नुहोस्, तपाइँको PayStand वेबपेज, फेसबुक, Tumblr, WordPress, वा कहिँ पनि। तपाईंको सबै स्टोर फ्रन्टबाट, PayStand ले तपाईंको सबै अर्डरहरूलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दछ।
बहु वस्तु प्रकारहरू - तपाईको क्याटलग पृष्ठबाट सबै आईटम प्रकार प्रस्ताव गर्नुहोस्। बिक्री गर्नुहोस् र भौतिक वस्तुहरू बिक्री गर्नुहोस्, डिजिटल आईटमहरू बिक्रीको लागि अपलोड गर्नुहोस्, भुक्तानी लिनुहोस्, वा दान स्वीकार्नुहोस्।
नि: शुल्क पेस्ट्यान्ड वेबस्टोर - प्रत्येक पेस्ट्यान्ड प्रयोगकर्ताले आफ्नै पेसस्ट्यान्ड अनलाइन वेबस्टेड पृष्ठ र अद्वितीय ठेगाना युआरएल प्राप्त गर्दछ।
अब बटनहरू र वेबसाइट एम्बेडहरू खरीद गर्नुहोस् - अब खरीद गर्नुहोस् बटनहरू थप्न वा तपाइँको साइटमा तपाइँको पेस्ट्यान्ड एम्बेड गर्नु यूट्यूब भिडियोमा छोड्ने जत्तिकै सजिलो छ।
उत्तरदायी छवि लोडर - पे स्ट्यान्डले प्रति आइटमको एकाधिक छविहरूलाई अनुमति दिन्छ र अपलोड गरिएको प्रत्येक छवि फाईलको धेरै स्केल गरिएको संस्करणहरू उत्पन्न गर्दछ। हाम्रो छवि लोडरले प्रत्येक उपकरण र स्क्रिनको लागि लोड गर्न उपयुक्त छवि आकार पत्ता लगाउँदछ र चयन गर्दछ - रेटिना डिस्प्लेको साथ एप्पल उपकरणहरू सहित।
सामाजिक लिङ्कहरू - स्वचालित रूपले प्रत्येक आइटम सिर्जना गरिएकोसँग सामाजिक नेटवर्क लिंक प्रदर्शन गर्नुहोस्, तपाईंको आगन्तुकहरूलाई साझा गर्न र प्रत्येक प्रमुख नेटवर्कमा तपाईंको बारेमा कुरा गर्न दिनुहोस्। तपाईका ग्राहकहरु पनि सक्छन जस्तै तिमी र शेयर तिनीहरूको रसिदबाट।
प्रत्यक्ष फेसबुक पृष्ठ एकीकरण - PayStand ले तपाईंलाई एक नि: शुल्क फेसबुक अनुप्रयोग दिन्छ जुन तपाईंको फेसबुक पृष्ठहरूसँग एकीकृत गर्दछ। तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँको पृष्ठ छाडेर नै फेसबुक मा सिधा खरीद गर्दछ (जसले बिक्री घाटा रोक्न मद्दत गर्दछ)।
बहु भिन्नताहरू - आकार, र ,्ग, प्रकार, वा कोष जस्ता विभिन्न विकल्पहरूको साथ आइटम, भुक्तान, वा दानलाई अनुकूलित गर्नुहोस्। पेस्ट्यान्डले तपाइँलाई तपाइँको प्रत्येक अनुकूलन योग्य भिन्नताको लागि मूल्य सेट गर्न र सूची ट्र्याक गर्न दिन्छ।
विश्वव्यापी पोष्टिंग / साझेदारी - एकै पटक सबै सामाजिक प्लेटफार्म र संचार च्यानल भर तपाईको आईटमहरू सजिलैसँग साझा गर्नको लागि पेस्ट्यान्डको युनिभर्सल पोष्टिंग उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। जति धेरै ठाउँहरू तपाईंको दर्शकहरू त्यति ठूलो हुन्छन्।
All-in-One समाधान - सबै भुक्तानहरू लिन र अनलाइन बेच्न आवश्यक छ। सबै समावेश छ। कुनै अतिरिक्त होस्टिंग खाताहरू, भुक्तानी प्रोसेसरहरू, व्यापारी खाताहरू, वेब डिजाइनरहरू, प्रोग्रामरहरू, अर्डर म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर, वा अन्य विशिष्ट टाउको दुखाइ आवश्यक छैन!
भिडियो पदोन्नति - युट्यूब वा प्रयोग गरेर तपाईंको वस्तु सूचीकरणको विवरणमा भिडियो थप्नुहोस् Vimeo एम्बेड कोड
स्वत: उत्तरदायी डिजाइन - सबै पेस्ट्यान्ड पृष्ठहरू उत्तरदायी छन् र कुनै पनि मोबाइल उपकरण, आईप्याडहरू, वा कम्प्युटर स्क्रिन आकार र रिजोलुसनमा काम गर्दछन्।
अनुकूलन वस्तु वर्णन वस्तु वर्णन थप्नुहोस् जुन तपाइँलाई तपाइँको फन्ट, पाठ सजावट, छवि, लिंक, भिडियो, र अधिक अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ।
ग्राहकहरु संग प्रत्यक्ष संचार - PayStand ले तपाईंलाई ईमेल ठेगानाहरू र शिपिंग ठेगानाहरू प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई मार्केट गर्नुहोस्।
बहु लेखक समर्थन - म्यान्ज गर्न मद्दत गर्नको लागि धेरै व्यक्तिहरू सक्षम गर्नुहोस् र तपाईंको प्रत्येक PayStand खाताहरू चलाउनुहोस्।
टैग: क्रेडिट कार्ड प्रोसेसरपेस्ट्यान्डलेनदेन शुल्कशून्य प्रतिशत
न्यान्सी मायरल्याण्ड, मायरल्याण्ड मार्केटी
अप्रिल 15, 2014 मा 3: 36 PM
मलाई यो मन पर्छ, डग! म यसलाई अझ अनुसन्धान गर्दछु किनकि यो अन्तिम तत्त्वहरू मध्ये एक हो जुन मैले अनलाइन सुरूवातबाट ढिला गरें। तिमी उतक्रिस्त् छौ!
अप्रिल 21, 2014 मा 1: 50 PM
के यो राजनीतिक अभियानका लागि चन्दा उठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ?